LSinnaan la'aanta u dhaxaysa haweenka iyo ragga ayaa ku sii jirtay adduunka shaqada muddo tobanaan sano ah. Dumarku waxay helaan celcelis ahaan 24% wax ka yar ragga (9% farqiga mushaharka ayaa ah mid aan xaq ahayn), aad ayey uga badan yihiin waqti-dhiman, sidoo kale waxay la kulmaan galmo xagga shaqada, ha ahaato mid miyir leh iyo haddii kale.
Sharciga Sebtembar 5, 2018 ee xorriyadda doorashada mustaqbalka xirfadeed ee qofka gaar ahaan waxa uu abuuray waajibaadka shirkadaha leh ugu yaraan 50 shaqaale ah xisaabi oo daabac tusmahooda sinaanta xirfadeed sannad kasta, ugu dambayn March 1 iyo, hadday natiijadoodu ku qanci waydo, in meel la dhigo falalka sixitaanka.
Tilmaantan, oo lagu xisaabiyo 4 ama 5 tilmaamayaal iyadoo ku xidhan xajmiga shirkadda, waxay suurtogal ka dhigaysaa in la bilaabo ficil-celinta iyo hagaajinta arrintan. Xogta waxaa lagu wadaagaa iyadoo lagu saleynayo hab la isku halayn karo waxayna suurtogal ka dhigaysaa in la dhaqaajiyo levers si loo dhammeeyo farqiga mushaharka ee u dhexeeya haweenka iyo ragga.
MOOC, oo ay soo saartay wasaaradda shaqada u qaabilsan, ayaa ujeeddadeedu tahay inay kugu hagto xisaabinta Tusahaan iyo tallaabooyinka la qaadayo iyadoo ku xiran natiijada la helo.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tusmada sinnaanta jinsiga Diisambar 13, 2021Tranquillus
horeBIG - Hordhaca Bioinformatics iyo Daawooyinka Genomic